एक्सन स्टारको आध्यात्मिक यात्रा - मनोरञ्जन - नेपाल
अभिनेता निखिल उप्रेती जनकपुर पुग्दा मान्छेको भीड लाग्यो । यसअघि पनि उनी त्यहाँ पुगेका थिए । तर ३ असारको यो भीड खास थियो किनकि उनी सुटिङ वा सिनेमाको कामले नभई समबोधी प्रवचकका रुपमा ओर्लिंदै थिए । त्यहाँ उनले करिब चार सय श्रोतामाझ जीवन र ज्ञानसम्बन्धी दुई घन्टा प्रवचन दिए । प्रश्नोत्तर गरे । निखिल भन्छन्, “सुरुमा कोही–कोही मलाई हिरो भनेर हेर्न आए होलान् तर जब मेरा कुरा सुन्दै गए, म हिरो हो भन्ने नै बिर्सिए ।”
आजकल निखिल जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ फिल्म होइन, जीवन र जगत्को कुरा हुन्छ । हेटौँडाको मानव सेवा आश्रम र झम्सिखेलस्थित कविर आश्रममा समेत निखिलले प्रवचन दिइसकेका छन् । शाकाहारी संघ र नवजीवन परोपकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा रोजै पुग्छन् । “अचेल हिरो होइन, प्रवचक र वक्ताका रुपमा निमन्त्रणा आउन थालेको छ,” शान्त स्वरमा निखिलले भने, “मलाई ज्ञान के हो थाहा छैन तर अज्ञानता बुझेको छु । त्यही अज्ञानताबारे बताउँछु । बाँकी त सबै ज्ञान भइहाल्यो ।” उनी खासगरी नयाँ पुस्तासँग भलाकुसारी गर्न रुचाउँछन् ।
सात तलाबाट हाम्फालेर निखिलको फिल्मी करिअर सुरु भयो । कुनै समय थियो, दैनिक तीन ‘सिफ्ट’ मा सुटिङ गर्थे । तैपनि अफर आएजति फिल्म खेल्न भ्याउँदैनथे । यही कारण निर्माता/निर्देशक बिच्किन्थे । राजेश हमालपछि नेपाली फिल्म उद्योगका सबैभन्दा अग्ला स्टार सम्भवतः उनै हुन् । दुई सय फिल्म खेले । सिने–एक्सनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याए । हाम्रो सन्दर्भमा उनी स्टन्टको त ‘बादशाह’ नै हुन् । फिल्म निर्माण र निर्देशन पनि गरे । स्टारडमको भरपुर स्वाद चाखिसकेका निखिल यतिबेलाचाहिँ आध्यात्मिक यात्रामा लीन छन् । समानान्तर ज्ञान फैलाउन आफैँले ‘समबोधी’ सुरु गरे । यसको मुख्य वक्ता निखिल नै हुन् । देशका विभिन्न कुना र नेपाली डायस्पोरामा समबोधीबारे जानकारी गराउन गृहकार्य गर्दै छन् ।
बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ, निखिल आध्यात्मिक मार्गमा भर्खरै अग्रसर हुँदै छन् तर होइन । बाल्यकालबाटै उनले स्वयंबधोध सुरु गरिसकेका थिए । सुटिङमा भ्याई नभ्याई नहुने समयमा रातविरात मन्दिर धाउँथे, गुरुहरुसँग शिक्षा लिन्थे । जीवन र जगतसम्बन्धी सात सय किताब त्यही बेला पढेको दाबी गर्छन् । ओशोका हरेक प्रवचन र पुस्तकका सार कन्ठस्थ छ उनलाई । तर हिरोका रुपमा हिट भइरहँदा कहिल्यै यी कुरा बाहिर ल्याएनन् । फिल्म त उनका लागि कर्म मात्र थियो, चैनका लागि त अध्यात्ममा लीन हुन्थे ।
त्यसो त, कतिले निखिलको यो गुणको चाल पाइसकेका थिए । त्यसैले फिल्मवृत्तमा उनको ‘निकनेम’ थियो, स्वामी । तर यस्ता विशेषण उनी रुचाउँदैनन् । भन्छन्, “स्वामी, ज्ञानी, विवेकी केही होइन । म त सिर्फ आफ्नो अनुभव बाँड्न खोजिरहेको छु ।”
बच्चैदेखि एक्लै रमाउँथे, भीडभाडबाट पर भाग्थे । जति पस्कियो, त्यति नै खाने । थप्ने बानी थिएन । घरमा सबैले भैँसींको दूध खान्थे तर गाईलाई माता भनेर पुज्थे । निखिललाई पनि पुज्न लगाइयो तर मानेनन् । त्यतिबेलै भनेका थिए रे, ‘दूध भैँसीको खाएपछि मेरा लागि त माता भैँसीं हो, गाई होइन ।’ मनमा यस्ता अनेक सवाल उठ्थे, अरुसँग सोधेर होइन, आफैँभित्र खोज्ने प्रयास गर्थे । निखिल भन्छन्, “अहिले पनि मलाई लाग्छ, हामी अरुका बारेमा बुझ्न खोज्छौँ, पढ्छौँ तर आफूलाई चिन्ने प्रयास गर्दैनौँ । आफूलाई नचिनी अरुलाई चिनेको के सार ?” खासमा समबोधीमार्फत उनले युवाहरुलाई बाँड्ने ज्ञान पनि यही हो, आफैँभित्र खोज ।
अहिलेको शिक्षा प्रणालीको आंशिक खिलाफमा छन् निखिल । उनकै शब्दमा, यो शिक्षा कमाइ खाने भाँडो मात्र हो । ज्ञान होइन । वास्तविक ज्ञान हुन्थ्यो भने चिकित्सा पढिरहेको विद्यार्थी किन ‘डिप्रेसन’ मा जान्छ ? “यो पढाइले दाम दिन्छ, नाम दिन्छ तर चैन दिँदैन । चैनबिनाको जीवन नीरस हुन्छ,” आफ्नो औपचारिक अध्ययनबारे बताउन नचाहने निखिल भन्छन्, “तर यही कोर्सको पढाइलाई मात्र सर्वोपरि मान्नु हुन्न । संसारमा बुझ्नुपर्ने कुरा अरु धेरै छन् ।” उनले आफ्नो समबोधी अभियानमा एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ र सूचना–प्रविधिका विद्यार्थीहरु सामेल रहेको जानकारी दिए ।
अधिकांश कलाकारहरु सेवा वा अनेक बहानामा समाजमा पुग्छन् । भित्री स्वार्थ पूरा गर्छन् । अध्यात्म र ज्ञानको नाममा निखिलको नियत पनि त्यस्तै त होइन ? शंका स्वाभाविक छ । उनले सेकेन्डभरमै जवाफ फर्काए, “हुँदै होइन । मलाई एउटाको सम्पत्ति अर्कोलाई दिएर दानी बन्नु पनि छैन । त्यसमाथि समबोधीमा म जे गर्छु, त्यो सबै निःशुल्क हो ।” अनि, फिल्म नि ? कलाकारिताबाट टाढा जाने योजना रहेनछ । आफ्ना फिल्मले सुखद व्यापार नगरेपछि केही समय ‘ब्रेक’ लिएको उनको भनाइ छ । अब छिट्टै आयो भैरव निर्देशन गर्दै छन् । अभिनय र लेखन पनि उनकै । भन्छन्, “फिल्म मेरो कर्म हो । कर्म नगरी म बस्न सक्दिनँ ।”
निखिलले एउटा घटना सुनाए ।
उनी जन्मिएपछि घरमा एक जोगी आएर भनेछन्, ‘जोगी पैदा हुवा ।’ यसो भन्नासाथ निखिलका बाबुले जोगीलाई लखेटेछन् ।
के त्यो जोगीको बोली मिल्ला त ?
यसको जवाफ निखिलसँगै छैन सायद ।
ट्याग: रङनायक निखिल उप्रेती